China 316L 316 Zezıhlabane iphuma insimbi engagqwali ipuleti Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana 316L 316 Kuyashisa insimbi engenasici egoqiwe ipuleti, 316 316L HRP, PMP
Pallet isisindo: 0.5MT-3.0MT
Ukuqhathanisa i-316L / 316 no-304 Isicelo sensimbi engagqwali
Insimbi engu-304 ingamelana nokugqwala kwe-sulfuric acid, i-phosphoric acid, i-formic acid, i-urea, njll. Ifanele ukusetshenziswa kwamanzi okujwayelekile, futhi isetshenziselwa ukulawula igesi, iwayini, ubisi, i-CIP yokuhlanza uketshezi nezinye izikhathi ngokuxhumana okuncane noma okungekho nhlobo ngezinto zokwakha. Ibanga lensimbi le-316L lingeze i-molybdenum element ngesisekelo se-304, engathuthukisa kakhulu ukumelana kwayo nokugqwala kwe-intergranular, i-oxide stress corrosion futhi inciphise ukuthambekela okushisayo okushisayo phakathi nokushisela, futhi futhi kunokumelana okuhle ne-chloride corrosion. Imvamisa isetshenziswa emanzini amsulwa, amanzi acolisisiwe, imithi, amasoso, uviniga nezinye izikhathi ezinezidingo eziphakeme zenhlanzeko nokugqwala okuqinile kwemidiya Intengo ka-316L icishe yaphindeka kabili leyo ka-304. Impahla eyakhiwe ngo-304 ingcono kuno-316L. Ngenxa ukumelana ukugqwala futhi omuhle ukushisa ukumelana 304 futhi 316, lisetshenziswa njengoba insimbi engagqwali. Amandla nobulukhuni be-304, 316 kuyafana. Umehluko phakathi kwalokhu ukuthi ukumelana nokugqwala okungu-316 kungcono kakhulu kunalokho kuka-304. Iphuzu elibaluleke kakhulu ukuthi insimbi ye-molybdenum yengezwe kuma-316, okwenze ngcono ukumelana nokushisa.
Singasebenzisa izinsimbi ezimelana ne-electroplating noma i-oxidation ukuqinisekisa indawo yensimbi yekhabhoni, kepha lokhu kuvikelwa kuyifilimu kuphela. Uma ungqimba oluvikelayo lubhujiswa, insimbi engaphansi iqala ukugqwala. Ukumelana nokugqwala kwensimbi engagqwali kuya ngesici se-chromium. Lapho inani le-chromium elengeziwe lifinyelela ku-10.5%, ukumelana nokugqwala komkhathi kwensimbi engagqwali kuzokwanda kakhulu, kepha uma okuqukethwe kwe-chromium kuphakeme, yize kungathuthukisa ukumelana nokugqwala okuthile. Kepha hhayi okusobala. Isizathu ukuthi lokhu kwelashwa kuguqula uhlobo lwe-oxide engaphezulu lube yi-surface oxide efana naleyo eyakhiwe ngensimbi ye-chrome emsulwa, kepha lolu ungqimba lwe-oxide luncane kakhulu, futhi lungabona ngqo ubukhazikhazi bemvelo bensimbi. Ukwenza insimbi engagqwali inendawo ehlukile. Ngaphezu kwalokho, uma umhlaba ubhujiswa, indawo ebonakalayo yensimbi izosabela ngomkhathi. Le nqubo empeleni iyinqubo yokuzilungisa, eyakha kabusha ifilimu yokwenziwa futhi ingaqhubeka nokuvikela. Ngakho-ke, wonke ama-steels angenazinsimbi anesici esivamile, okungukuthi, okuqukethwe kwe-chromium kungaphezu kwe-10.5%, futhi ibanga lensimbi elikhethwayo liqukethe ne-nickel, efana no-304. Ukwengezwa kwe-molybdenum kuyaqhubeka kuthuthukisa ukonakala komkhathi, ikakhulukazi uma kubhekene nemimoya equkethe i-chloride, okuyilapho kwenzeka khona ngama-316.
Kwezinye izindawo zezimboni nezasogwini, ukungcola kubi kakhulu, ingaphezulu lizoba ngcolile, futhi nokugqwala sekuvele kwenzekile. Kodwa-ke, uma kusetshenziswa insimbi engagqwali ene-nickel, umphumela wobuhle endaweni engaphandle ungatholwa. Ngakho-ke, udonga lwethu olujwayelekile lwamakhethini, udonga ohlangothini nophahla lukhethiwe kusuka ku-304 insimbi engagqwali, kepha kwezinye izimo ezinolaka zezimboni noma zasolwandle, insimbi engagqwali engama-316 iyisinqumo esihle.
304 18cr-8ni-0.08c Ukumelana nokugqwala okuhle, ukumelana ne-oxidation nokusebenza, okungahambisani ne-aerobic acid, kungagxivizwa, kungasetshenziselwa ukwenza iziqukathi, i-tableware, ifenisha yensimbi, umhlobiso wokwakha, nemishini yezokwelapha
I-316 18cr-12ni-2.5Mo yande kakhulu ekwakhiweni kolwandle, imikhumbi, i-nuclear electrochemistry kanye nokudla imishini. Ayigcini nje ngokuthuthukisa ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali i-hydrochloric acid nolwandle, kepha futhi ithuthukisa ukumelana nokugqwala kwesisombululo se-brine halogen.
Langaphambilini 310s ipuleti lensimbi engagqwali eligoqiwe elishisayo
Olandelayo: umugqa wensimbi engagqwali ogoqiwe obandayo